အိုင်ပက်🤑🤑 FaceTime က App သည် iPad အတွက် FaceTime
1 iPad ပေါ်တွင် FaceTime သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို – iPad ပေါ်တွင်အိုင်ပက် FaceTime များအတွက် download, FaceTime အလုပ်မလုပ်
2 အိုင်ပက်အပေါ် FaceTime:
3 iPad ပေါ်တွင် Start ကို FaceTime မှအဆုံးစွန်လမ်းညွှန်:
4 သင့်ရဲ့ငါ Pad ပေါ်မှာမျက်နှာအချိန် Feature ကိုဖွင့်လိုက်ပါ:
5.1.1 သင့်ရဲ့လိုအပ်ပါသည်ဆက်သွယ်ပါ Locate:
6 သတင်းအချက်အလက် Panel ကိုဆက်သွယ်ပါ
iPad ပေါ်တွင် FaceTime သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို – iPad ပေါ်တွင်အိုင်ပက် FaceTime များအတွက် download, FaceTime အလုပ်မလုပ်
Apple ကအမြဲ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ. ဒါဟာသူ့ရဲ့ဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မသူတို့အား apps ဒါမှမဟုတ် software ကိုဖွင့်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်အလေးထားရှိပါတယ်. ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုအလွန်တရာ amplified ထားပါတယ်.
ipad များအတွက် download, FaceTime
ipad များအတွက် FaceTime ကို download
Apple iPad များအတွက် FaceTime
ipad ဖို့ဟာ android များအတွက် FaceTime
ipad download ပြုလုပ် FaceTime app ကို
နေ့စဉ်အသက်ပြည်သူ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသူနဲ့ဆက်စပ်နေချင်. ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, Apple ကအထူးတစ်အလွ videotelephony app ကို၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက် FaceTime အဖြစ်သိတယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ.
ဒီ app သီးသန့် iPhone ကို အသုံးပြု. အားလုံး Apple ကအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, မက်, iPod ကို, နှင့် iPad. Apple ကသားအပေါငျးအခြား devices တွေထဲမှာ, လူများက iPad သုံးစွဲဖို့ကိုချစ်. ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်မျက်နှာပြင်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းရလဒ်ဖောက်သည်သိသိသာသာအခြား devices မှနှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ features တွေနဲ့ apps များခံစားရန်ခွင့်ပြု.
သင်သည်သင်၏ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အမြင်ရှိသည်ဖို့ iPad ပေါ်တွင် FaceTime ကိုသုံးနိုင်သည်. ဤဆောင်းပါးသည်နက်ရှိုင်းအတွက်အရေးပါမှုကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်, ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ, တပ်ဆင်, အသုံးပြုမှု, နှင့် iPad များအတွက်မျက်နှာအချိန် features တွေ.
FaceTime ပိုင်းတွင် iPhone 4S တွင်အဘို့အနေသူများကဖန်တီးသောအံ့သြဖွယ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံခေါ်ဆိုမှု App ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားဝယ်လိုအားအဖြစ်ကောင်းစွာအိုင်ပက်အသုံးပြုသူများအတွက်ကြောင့်ရရှိနိုင်စေရန် Apple ကအနိုင်အထက်. အိုင်ပက်သင်အမျိုးမျိုးသော features တွေကမ်းလှမ်းပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး features တွေထဲကတစ်ခုသင်အလွယ်တကူ FaceTime မှတဆင့်ဗွီဒီယိုကိုသို့မဟုတ်အသံခေါ်ဆိုမှုများနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
သငျသညျရဲ့ MAC OS ကိုအတူတစ်အိုင်ပက်သူအခြားအသုံးပြုသူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဖို့မျက်နှာအချိန်ကိုသုံးနိုင်သည် 10.6.6 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဗားရှင်း. သင်ရုံက၎င်း၏ Apple ID မှတစ်ဆင့်ကြောင့်လူတစ်ဦးကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်. FaceTime ကနေတဆင့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုံးဝအခမဲ့များမှာ. သငျသညျဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားမရစတင်ရန်သင်၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုသို့မဟုတ်ဆယ်လူလာဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်.
FaceTime app ကိုအမှန်တကယ် iPhone အပါအဝင် iOS ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်, အိုင်ပက်, iPod, နှင့် Mac. ဒီ app ကိုသင်ပယ်ရှင်းသင့်မိသားစုကနေအခါထိတွေ့နေဖို့ခွင့်ပြု, မိတ်ဆွေများက, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, နှင့်ဝန်ထမ်း.
သင်သည်သင်၏အိုင်ပက်ပေါ်မှာဤထူးဆန်းသော videotelephony app ကို အသုံးပြု. ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်တစုံတခုကိုလုပ်ဖို့မလိုပါမစိုးရိမ်ပါ. Apple ကပြီးသားသင့်ရဲ့အိုင်ပက်ပေါ်မှ FaceTime app ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်.
သင်ရုံသင့်ရဲ့အိုင်ပက်ပေါ်မှာဤ Pre-installed FaceTime app ကို activate လုပ်ဖို့သင့် Apple ID လိုအပ်. သငျသညျတခါသင်သည်သင်၏အိုင်ပက်ရှိသည်ကိုသိရန်အဘို့ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရမည်, သငျသညျဒေါင်းလုပ်မဆိုကူညီပြီးသို့မဟုတ်ရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘဲ FaceTime မှတစ်ဆင့်အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်.
အိုင်ပက်အပေါ် FaceTime ၏အကူအညီနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူန့်အသတ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုပါသို့မဟုတ်လက်ခံနိုင်သည်. ဒီ app ကိုသာကို iOS အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်သင်သာ iPhone ကိုအသုံးပြုနေသည်တဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူများသည်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများလုပျနိုငျ, မက်, iPod ကို, နှင့် iPad devices များ. သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်အိုင်ဒီကို အသုံးပြု. အိုင်ပက်အသုံးပြုသူများအဖို့ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်.
iPad ပေါ်တွင် FaceTime
iPad ပေါ်တွင် Start ကို FaceTime မှအဆုံးစွန်လမ်းညွှန်:
အိုင်ပက်2သို့မဟုတ်နောက်မှ FaceTime မှတဆင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလုပ်ဆောင်သွားရန်သင်သည်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တစ်ခု Built-in ကင်မရာရှိပါတယ်. ဒါဟာအပြန်အလှန် app ကိုသငျသညျသူတို့ထံမှဝေးကွာသောအချိန်အခါသင့်ချစ်ရသူစကားပြောပေးနိုင်ပါတယ်.
အိုင်ပက်မှတဆင့်မျက်နှာအချိန်သင်တို့ရှိသမျှထင်ရှားတဲ့ features တွေကမ်းလှမ်းသော်လည်းသင်က၎င်း၏ app ကို၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိလို့မရဘူးနှင့်လည်းသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု၏မှတ်တမ်းတင်မပွုနိုငျ. သို့သော်နေဆဲ, အသုံးပြုပါကယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုလုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားအသုံးဝင်သော features တွေကမ်းလှမ်း.
သင့်ရဲ့ငါ Pad ပေါ်မှာမျက်နှာအချိန် Feature ကိုဖွင့်လိုက်ပါ:
အရေးအပါဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့အိုင်ပက်အတွက်မျက်နှာအချိန်အသုံးမပြုမီ, သငျသညျကို pre-installed အပေါ်မျက်နှာအချိန်အင်္ဂါရပ်လှည့်ခဲ့ကြကြောင်းသေချာအောင်, သင်ဤဖွငျ့လုပျနိုငျ:
သင့်ရဲ့အိုင်ပက်၏ Home Page တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်သော setting ကို menu ကိုသွားပါ.
ထိုအခါ, ဒါကြောင့်ကိုသက်ဝင် turn ဖို့မျက်နှာအချိန်အင်္ဂါရပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ.
သင်ယာယီသင့်ရဲ့အိုင်ပက်ကနေအင်္ဂါရပ်ကို turn off ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်စဉ်ကိုလိုကျလြှောကျနိုငျ.
သင့်ရဲ့အိုင်ပက်၏ setting ကို Menu ထဲမှာ, သငျသညျလညျးသငျ FaceTime မှတဆင့်ဆက်နွယ်နေရချင်သောသူအပေါင်းတို့အဆက်အသွယ်များ၏စာရင်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. သင်သည်သူတို့၏ e-mail, လိပ်စာများနှင့်ဖုန်းအကောင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဒီလုပျနိုငျ.
သင်သာသည်အခြား Apple က device ကိုအသုံးပြုသူများအရန်သင့် FaceTime မှတဆင့်ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်. ဤသူသည်သင်တို့ကို အသုံးပြု. နေသောအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူမျက်နှာအချိန်မှတဆင့် interlinked ရနိုင်ဆိုလိုတယ်
အိုင်ပက်2သို့မဟုတ်နောက်မှ, သို့မဟုတ်
Mac OS X မှာ running 10.6.6 သို့မဟုတ်
iPhone 4S တွင်သို့မဟုတ်နောက်မှသို့မဟုတ်
စတုတ္ထမျိုးဆက် iPod touch သို့မဟုတ်နောက်မှ
Apple ရဲ့ device ကိုအသုံးပြုသူများကမဆိုခေါ်ဆိုခြင်းမပြုမီ, သင်အိုင်ပက်အဆက်အသွယ်သူ့ကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြကြောင်းသေချာအောင်. သင့်ရဲ့အိုင်ပက်မှတဆင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အသံခေါ်ဆိုမှုနေရာယူခြင်း awfully လွယ်ကူသည်. သင်ရုံအပါအဝင်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်.
အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, မကျြနှာကိုအချိန်သင့်ရဲ့အိုင်ပက်အပေါ်တစ်ဦး Pre-ထည့်သွင်း feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အိုင်ပက်၏ပင်မမျက်နှာပြင်အပေါ်အိုင်ကွန်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်မျက်နှာအချိန် icon ကို click ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ, ဒါကြောင့်လိုအပ်သောဒေတာများကိုပေးစေခြင်းငှါသင်တို့ကိုမမေးပါလိမ့်မယ်.
သင်စကားပြောဆိုမှုစတင်ချင်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူ e-mail ကိုအိုင်ဒီနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါလို့ယူဆတယ်နေကြတယ်. လိုအပ်တဲ့အဆက်အသွယ်ရောက်ရှိပြီးနောက်, သင်ရုံဘေးက button ကို click ရန်ရှိသည်.
သင့်ရဲ့ FaceTime app ကို၏အဓိကမျက်နှာပြင်တွင်, သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုအဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သင်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏အကောင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်အခါ, သူသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်ပေါ်တွင်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သူ၏နာမကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ထိုအသုံးပြုသူအပေါငျးတို့သအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များရနိုင်. အဆိုပါစာရင်းသည်၎င်း၏နေအိမ်အရေအတွက်ကိုပြသ, လက်ကိုင်ဖုန်းနာပတ်, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ရှယ်ယာအဆက်အသွယ်ကဲ့သို့အခြားရွေးချယ်စရာ, အကြိုက်ဆုံးမှ add နှင့်ဤခေါ်ဆိုသူ၏ပိတ်ဆို့.
သတင်းအချက်အလက် Panel ကိုဆက်သွယ်ပါ
သင်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့, သင်ရုံသူသို့မဟုတ်သူမ၏နံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကသိမ်းဆည်းထားရန်ရှိသည်- လိပ်စာ. သငျသညျကိုသာမျက်နှာအချိန်နှင့်အတူအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားရမယ်.
လိုအပ်သောအချက်အလက်များ၏ထပ်တူပြီးနောက်, သင်ရုံဗီဒီယိုခလုတ်သို့မဟုတ်အသံခေါ်ဆိုမှုကို click ရန်ရှိသည်. ထိုအခါကမ္ဘာ၏အများဆုံးခစျြတျောမူသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုန်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုခံစားနိုငျ.
ထို့ကြောင့်ဤဥပဒေသတင်းအချက်အလက်များသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သော iPad ပေါ်တွင် FaceTime စတင်စေရန်ကူညီပေးသည်. ငါကအသေးစိတ်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်. သူတို့သည်လည်း iPad ပေါ်တွင်မျက်နှာအချိန်အသုံးပြုမှုကိုသိနိုင်အောင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူရှယ်ယာလုပ်ပါ.